Albedo iyo isu dheelitirka tamarta dhulka | Saadaasha Shabakadda
El Albedo Waa xiriirka ka dhexeeya tamarta ka muuqata iyo dhacdada hirarka dhererka iftiinka muuqda wuxuuna ka dhigayaa meerayaasha inay ifaan: iyagu ma lahan awood u gaar ah, waxay ka tarjumaysaa qayb ka mid ah iftiinka ay ka helaan Qorraxda.waxay kuxirantahay janjeedhka shucaaca dhacdada (sida ugu dhow ee qallooca ugu soo dhowaado dhinaca toosan, ka sii muhiimsan milicsiga) iyo dabeecadda dusha ka tarjumeysa. Si loo fududeeyo, awoodda milicsiga ee dusha sare waxay la xiriirtaa midabkeeda: jirka qafiifka ah wuxuu ka tarjumayaa si ka fudud kan mugdiga ah.
Dhul baraf daboolan wuxuu leeyahay albedo ka sarreysa seeraha. Sidaa darteed, barafka wuxuu leeyahay celcelis ahaan albedo ah 0,7, halka kan keynta cagaaran uu yahay 0,2. Albedo meeraha waa qiyaastii 0,1, taas oo macnaheedu yahay in ku saabsan a 30% ee tamarta qorraxda soo socota waxay mar kale u bilaabaneysaa qaab shucaac toos ah oo dhanka hawada ah. Albedo-ka qaaradaha waa ku dhowaad 34%, halka tan badahana ay tahay 26% iyo tan daruuraha joog hoose iyo dhexe waa inta udhaxeysa 50% iyo 70%.
Inkasta oo miisaanka meeraha ah isku dheelitirka tamarta waxay u dhigantaa eber, meelo yar oo ka mid ah dusha dhulka ayaan ka helaynaa isku dheelitirka. Meelaha qaar waxay helaan tamar ka badan inta ay sii daayaan; kuwa kale, dhanka kale, waxay sii daayaan wax ka badan inta ay helaan. Guud ahaan, isku dheelitirnaanta waxay ku jiraan dheeri illaa isbarbardhiga u dhexeeya 35º iyo 40º. Meelaha cirka isku shareeraya ayay ka siman yihiin, intaas wixii ka sii dambeeyaana way ku yaraanayaan. Kala duwanaanshaha caddadka tamarta la helay iyo xaaladda sii deynta kuleylka ama qaboojinta hawada, arrimaha keena gacan ka geysashada qaybinta cimilada iyo wareegga hawada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Tamarta ee Albedo iyo Earth
Waa inaad hubisaa qiimaha shucaaca qorraxda ee dhulka ka baxsan. Isc = 1367 W / m ^ 2
Jawaab Mafrutos 59